ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: 2012
ကျေးရွာ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲ NLD ပါတီဝင်များ မောက်မာ မိုက်မဲ ဗိုလ်ကျစိုးမိုး
စစ်ကိုင်းတိုင်း တောင်တွင်းကြီး ဒေသမှာတော့ ပြည်သူတွေက စိတ်ဝင်စားမှု ရှိပေမယ့် ဘယ်သူဘယ်ဝါကို ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက် မပေးနိုင်ကြတာတွေကြောင့် ဘက်လိုက်မှု၊ မသမာမှုတွေ ကြုံနေရတယ်လို့ တောင်တွင်းကြီး ဒေသခံ ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောပါတယ်။
သူက “ပြည်သူတွေက အသိပညာ နည်းပါးတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒီလူကိုမဲပေးပါ၊ ဟိုလူမဲပေးပါ ဆိုပြီး မဲပေးခိုင်းကြတယ်၊ ဒီဒေသမှာ NLD ပါတီက အင်အားကောင်းနေတော့ NLD ပါ တီဝင်တချို့ဟာ မောက်မာတာ၊ မိုက်မဲမှုတွေနဲ့ ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးချင်တာတွေ တွေ့နေရတယ်” လို့ ပြောတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသတချို့မှာ NLD က လူအများရဲ့ ထောက်ခံမှုရနေတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အောက်ခြေ ပါတီဝင်တချို့ဟာ အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ယူနေတာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ပါတီ ဗဟိုအနေနဲ့ အလေးထားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း ဦးခင်မောင်ဆွေက ထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်။
တောင်ကြီးအထက(၄) ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး လုပ်ရပ်များ အတွက် အရေးယူ ပေးပါရန် (ပေးစာ)
တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ အထက(၄) ကျောင်းတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တက္ကသိုလ် ၀င်တန်း ဖြေဆိုကြမည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများမှ အမှတ်တရ ထရက်ဆု အင်္ကျီများ ချုပ်ရန် အတွက် အင်္ကျီ၏ နောက်ကျော်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွပ်လပ်ရေး ဖခင်ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ တွေ့ရှိသွားပြီး ၄င်း ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲသည့် ဒသမတန်း grade 11 E တွင် ပညာ သင်ကြား နေသော ကျောင်းသား မောင်မင်းရသ အား ကျောင်းမှ ၁၇-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပစ်ခဲ့ပြီး အတန်း ပိုင် ဆရာမ ဒေါ်မိမိလေးအားလည်း ထွက်စာတင်ရန် အမိန့်ပေး ပြောဆို ခဲ့ရာ ဆရာမ ဒေါ်မိမိလေးမှာ ၁၉-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ထွက်စာ တင်ခဲ့ရပါသည်။
ထို့အပြင် ယင်း အထက (၄) ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီးသည် ဒီဇင်ဘာ ကျောင်းပိတ်ရက်တွင်လည်း ကျောင်း လုံးဝ ပိတ်ပေးခြင်း မရှိပဲ ဆရာ ဆရာမ များနှင့် ကျောင်းသား များအား စာသင်စေခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရ ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန် ထားသော ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာခြင်း မရှိသလို မထီမဲ့မြင် ပြုနေ သကဲ့သို့ ကျောင်းတွင်း အာဏာ ရှင် ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်နေသည်မှာ အနာဂတ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များအတွက် ရင်လေးစရာ ဖြစ်နေပါဖြင့် အရေးယူ ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
အမေစုသို့ပေးစာ ... NLDရဲ့ အန္တရာယ်
ဒီစာကို အမေစုဖတ်ရမရတော့ မသိပါဘူး။ ဖတ်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စကားလေးပြောလို့ ရရင်လာပြောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ... အမေစုရဲ့ဘေးက လူအုပ်ကို တိုးလို့မပေါက်လို့ ဒီကနေ ပဲပြောလိုက်ပါတယ်။
တစ်နေ့က ကျွန်တော်ရပ်ကွက်ထဲမှာ NLDရုံး ရပ်ကျေးတစ်ခု ဖွင့်တယ်။ ပါတီပြန်မ၀င်ဖြစ်သေးတဲ့ အချိန်မှာ ..အင်း... ငါပါတီပြန်ဝင်ရင်ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားမိတာနဲ့ ရုံးသစ်လေးထဲကို ကြည့်ဖြစ် မိတယ်။ ဘယ်သူတွေ များရှိလဲပေါ့။ ဟင်း...ဆိုစိတ်ထဲကထောင်းကနဲ့ ဒေါသထွက်မိသွားတယ်။ အလို .... ရုံးထဲကထိုင်ခုံမှာ အခန့်သားထိုင်နေတဲ့ ငနဲက ဘယ်သူများလဲ မှတ်တယ်။ ကျွန်တော်အသိ မိတ်ဆွေကို ထောင်ကျအောင် ကြံရွယ်ခဲ့တဲ့ အင်ဖော်မာ သတင်းပေးကောင် ဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းက ထောင်ထဲ(၅)ရောက်ခဲ့ရတာက ပြောပြမယ်နော်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံလေးတွေပါတဲ့ ကျောင်းသုံး ဗလာစာအုပ်လေးတွေ ကို စာသင်ကြားဖို ချို့တဲ့ တဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေ လိုက်ဝေငှပေးတဲ့သူပါ။ သူကသူ့ရဲ့ လုပ်အားခကိုစုပြီး ဗလာစာအုပ်လေးတွေ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် အကုန်ကျခံ လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ... စာအုပ်တွေဟာ မလောက်ငှပါဘူး။ သူအဖမ်းခံရတာကတော့ ဗလာစာအုပ်တွေ လိုက်ဝေငှလို့ စာရွက်စာတမ်း ပုဒ်မနဲ့ပါ။ သူ့ကိုရဲအဖမ်းမခံရခင်မှာ ဟိုရှောင် ဒီရှောင် သူလုပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ပါတီထဲက သစ္စာဖောက်လော်ဘီကောင်ကြောင့် ထောင်(၅)စံမြန်းလိုက်ရပါတယ်။ အချုပ်ထဲမှာ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းကို နောက်တစ်မှုထပ်တပ်ပါတယ်။ X2O ဗုံခွဲမှုနဲ့ ပတ်သတ်တယ်ဆိုပြီး ဘယ်လိုချတယ်တော့ မသိပါဘူး။ သူထောင်(၅)နှစ်ကျသွားရပါတယ်။ ခက်တာကကျွန်တော်သူငယ်ချင်းဟာ ဘာသာရေးသမား တစ်ယောက်ဖြစ်သလို မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ ခပ်အေးအေးလူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲမှာ ခံစားရလို့ မဆုံးပါဘူး။ သူကတော့ ထောင်ထဲကနေ စကားပါးလိုက်ပါတယ်။ ငါအရင်ဘ၀က ၀ဋ်ကြွေးကျန်နေလို့ နေမှာပါတဲ့။ ဆပ်ရမှာပဲတဲ့။ ရင်ထဲနင့်သွားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ထားတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းကို သတင်းပေးလုပ်ခဲ့တဲ့ ပါတီသစ္စာဖောက်ကြီးဟာ အခုတော့ ရပ်ကျေး ရုံးခန်းမှာ စည်းရုံးရေးခေါင်းဆောင် ဖြစ်နေပါသတဲ့။ သွား....ပြီ။ ဒီလိုလူကို ဘာလို့ခန့်လိုက်ကြပါလိမ့်။
နောက်ထပ် ပိုကြေကွဲရတာက ရပ်ကျေးဥက္ကဌပါ။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲဝင်ဟောင်းတွေထဲမှာ လား....လားမှမမြင်ဘူး။ သူအရင်က ကြံ့ဖွတ်ပါတီမှာ ထောင်ထောင်လုပ်နေတဲ့သူ၊ မမှတ်မိပဲနေမလား ဒီရုပ်ကြီးတွေ။ ငါးပါးတော့မှောက်ပြီ။ ကဲ....ဒုဥက္ကဌတဲ့ လာပြန်ပြီ ရဲနဲ့ပေါင်းပြီး ရပ်ကွက်ထဲမှာ ချဲဒိုင်ဖွင့်နေတဲ့သူ။ ခုခေတ် သဘောအရဆို ခရိုနီကောင်ပေါ့။ ပိုင်ရာဆိုင်ရာ အရမ်းကတ်တဲ့လူ။ သွားပါပြီ.... ကျုပ်တို့လေးစားခဲ့ရတဲ့ ပါတီကြီးထဲမှာ ဒီလိုလူတွေ စုနေပါလားလို့ ပြန်ကြည့်မိတော့ ကြံ့ဖွတ်ထဲက ကလေးတစ်ချို့တောင်ပါနေတယ်။ ဘယ်လိုများ ဖြစ်ပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားမရတော့ဘူး။ ပါတီပြန်ဝင် ချင်စိတ်တွေ ပျောက်ထွက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်ကို တချို့က ပါတီဝင်ဟောင်းမှန်း သိကြလို့ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံကြပေမဲ့ (မှတ်ချက် တစ်ယောက်တစ်လေပါ) တချို့က မင်းပါတီဝင်ချင် လို့လား ဖောင်ပေးမယ်တဲ့။ ပါတီရဲ့ စည်းကမ်းတွေ သေချာလိုက် နာနိုင်ရဲ့လားတဲ့။ ပြသနာ။ အဲ့လိုပြောတဲ့သူက ရပ်ကွက်ထဲ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ မီးသတ်လိုလို စွမ်းအားရှင်လိုလိုကောင်။ စာလည်း နကန်းတစ်လုံးမတတ်။ ရင်နာရပါပေ့ အမေရေ။ ကျွန်တော် သေချာရုံးခန်းထဲေ လ့လာကြည့်မိတော့ ဘယ်သူတွေမှန်း ဘာကောင်တွေမှန်းမသိ အုံးအုံးထလို့။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အရင် လက်တွဲခဲ့တဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ်။ သူကတော့ အရမ်း သံယောဇဉ်ကြီးပုံ ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်း.... မင်းပျောက်နေတယ်ကွ။ ပါတီပြန်ဝင်လေကွာတဲ့။ ကျွန်တော် စစခြင်းမှာပဲ သူ့ကို မိတ်မဆတ်ပဲ ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ ဘာတွေလဲဗျာ... ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားကြတာလဲ။ ကျုပ်တို့ပါတီတော့ ပျက်စီးပါပြီဗျာဆိုတော့ ... သွားမပြောနဲ့ကွ။ သူတို့က ခုချိန်မှာ စိတ်ဓါတ်အတတ်ကြွဆုံးပဲတဲ့။ ငါတို့တောင် ဂျောင်ကတ်နေရတယ်တဲ့။ ဗုဒ္ဒေါ...။ ဒါပေမဲ့. .. အခုချိန်မှာ ငါဖြစ်စေချင်တာကတော့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်းပဲ ပြောလိုက်ချင်တယ်တဲ့။ တို့ပါတီဝင်တွေကို အရင်ကလို မျက်လုံး ဒေါက်ထောက်ကြည့်ပြီး ပြန်ဖမ်းတာမျိုးလေး လုပ်ပြစေချင်တယ်။ သောက်မြင်ကတ်တိုင်း အချုပ်ထဲထည့်။ စစ်ကြောရေးပို့ ဆိုတာတွေ နည်းနည်းလောက် လုပ်ပြလိုက်ရင်တောင် ဘယ်ခွေး တစ်ကောင် ကြောင်တစ်မှီးမှ ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ လူစုံတုန်း အစည်းဝေးရှိတာနဲ့ ကျွန်တော်ကို ရာထူးယူထားသူတချို့နဲ့ မိတ်ဆတ်ပေးတယ် ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းက။ ဒါပါတီဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ ခံဖော်ခံဖက် ကျွန်တော်သူငယ်ချင်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ဖြုံသွားကြတယ် ရေပေါ်ဆီတွေ။ သူတို့က ကျွန်တော် အသစ်ထင်နေကြတာကို။ အားလုံးကို စကား တစ်ခုမေးချင်တယ်။ မေးလို့ရမလားဆိုတော့ တစ်ချို့က မေးပါရပါတယ်ပေါ့။ ဘာလို့ NLDမှာ ပါတီဝင်တာလဲဆိုတော တချို့က စဉ်းစားသလိုဘာလိုတွေးပြီး မဖြေတတ်ကြဘူး။ ဥက္ကဌဆိုသူက မင်းကလဲ ပါတီဝင်ဖြစ်ချင်လို့ ပါတီထဲဝင်တာေ ပါ့ကွတဲ့။ သေပါရော....ဗျာ။ မေးမိတဲ့ပါစပ်ကိုက စပ်ဆော့မိတဲာ့ ငါကိုကမှားတာလို့။ သြော်.... နိုင်ငံရေး ခံယူချက်တွေ ပြင်းထန်လှပါပေ့လို့။ အိမ်ပြန်တော့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောရင်း ... မင်းတို့ ဒီလိုလူတွေ ဘာမသိညာမသိတွေ ဘာလို့လက်ခံ ထားတာလဲလို့ မေးတော့။ ငါတို့က သိတယ်။ ငါတို့ဆီ လာဝင်ရင် သူတို့အကြောင်း ငါတို့က သိနေတော့ လာမ၀င်ရဲဘူး။ ရုံးချုပ်မှာသွားဝင်တာ တဲ့။ ကဲ...အေးရောဗျာ။ ဒါနဲ့ ပါတီဝင် သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေကော ဘာလို့ ပြန်မ၀င်ကြတာလဲမေးတော့။ သူတို့ ကျပ်တည်းနေတဲ့ အချိန်က တိုက်ခဲ့၊ ၀င်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့။ ခုလုပ်ချင်နေတဲ့ သူတွေ လုပ်ကြပါစေတော့တဲ့။ ထောင်(၅)နှစ် ကျ သွာြး ပီးပြန်ထွက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုလဲ အခုပြန် လွတ်လာပြီးတော့ မုန့်ဖတ်ထုပ်ရောင်းနေတယ်တဲ့။ နောက်ဆုံးမှာ သူငယ်ချင်းက မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ မင်းပါတီပြန် မ၀င်ဘူးလားတဲ့။ နေပါစေတော့ကွာ။ တို့က အဖမ်းခံရမှလုပ်ချင်တာလို့ .. .ပြောလိုက်တော့ ရယ်ပါလေရောဗျာ။ တချို့ကိစ္စများ ကိုယ်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်း သလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ ချန်လှပ်ထားခဲ့ ရပါသည်။
သုံးခွမြို့နယ်တွင်လည်း NLD ကို ဆန္ဒပြပြန်ပြီ
(၉-၁၂-၁၂ ) ရက်နေ့ (၁၁ဝဝ)ချိန်တွင် သုံးခွမြို့နယ်၊ လက်ပံကျိုးကျေးရွာမှ ပြည်သူ (၆ဝ)ဦးသည် ထော်လာဂျီ ဂွမ်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်၍ သုံးခွမြို့လည် လမ်းမတစ်လျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လမ်းတစ်လျှောက် တွင်လည်း လက်ကမ်းေ ကြညာချက်များ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်တွင်-
'' ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီကို လေးစားပါသည် ၊ ညီလာခံကိုထောက်ခံပါသည်''
'' NLD ပါတီကို ဖျက်ဆီးသော၊ ညီလာခံကို ဖျက်ဆီးသော၊ လက်ပံကျိုးရွာ နှစ်ချမ်းကွဲအောင် အကြံ အစည်ကြီးစွာဖြင့် ဖျက်ဆီး သွားသော မြို့နယ် NLD ပါတီကော်မရှင်မှ ခေါင်းဖြူ ဦးတင်ဝင်းနှင့် ဦးတင်အေးတို့ကို ရှုတ်ချပါသည်''
''NLD ပါတီထဲတွင် ပါတီပျက်ဆီးအောင် ပြည်သူလူထု အကြည်အညိုပျက်အောင် လုပ်ဆောင်နေသော လူယုတ်မာများ ရှိနေသည် ပြည်သူများ အထူးသတိထားပါ'' စသည့်စာသားများကို ကွန်ပျူတာစာစီ၍ လမ်းတစ်လျှောက် စောင်ရေပေါင်းမြောက် များစွာဖြန့်ဝေ သွားကြပါသည်။
'' လူဆိုးလူယုတ်မာများ ကွန်းခိုနေသော NLD ပါတီမှ နှုတ်ထွက်ပါသည် ။ပြည်သူများ အထူးသတိထားပါ'' ဟုပါရှိကြောင်း၊ ၄င်းလက်ပံကျိုးရွာသားများ ဦးဆောင်လာသူမှာ ဦးပိုးတီ(ခ)ဦးသိန်းဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဦးပိုးတီ(ခ) ဦးသိန်းဆင့်မှ ပြောကြားရာတွင် -
'' ၄င်းတို့သည် အုပ်ချုပ်ခံလူ တန်းစားများဖြစ်ကြောင်း၊(၁၂ဒီဝ၈)ရက်နေ့ ကျေးရွာ NLD ပါတီအဖွဲ့အား မြို့နယ် NLD ပါတီ ကော်မရှင် အဖွဲ့မှ လာရောက်ရွေးချယ်ခဲ့ရာတွင် ရွာ၏ လူဆိုးစာရင်းဝင်များနှင့် အလုပ်အကိုင် မရှိသူများကို NLD ပါတီမှ ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သည့် ရွာသားများအားလုံးအား NLD ပါတီအား မဝင်မနေရဟုဆိုကာ NLD ပါတီဝင်ကတ်များ အတင်းအကြပ် တစ်ပါတည်း ထုတ်ပေးသည်ကို မကျေနပ် သည့်အတွက် ၄င်းပါတီဝင်ကတ် များအား မြို့နယ် NLD ပါတီသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရန် ရွာမှ ချီတက် ဆန္ဒပြလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အကျိုးရှိမည့်နေရာတွင် ၄င်းတို့ကို အသုံးချခံလိုကြောင်း၊ ယခုဆန္ဒပြရခြင်းမှာ ပြည်သူ အနေဖြင့် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များတွင် အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နေသူများနှင့်သာ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း၊ မိမိတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နေသူ များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားလိုကြောင်း ပြောကြားသွာပါသည်။ အဆိုပါ သုံးခွမြို့နယ် လက်ပံကျိုးကျေးရွာ ဆန္ဒပြမှုသည် (၁၄ဝဝ)ချိန်ခန့်တွင်ပြီးဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ခေတ်သစ် မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်..NLD ရပ်ကျေးညီလာခံမှာ ဗျာ
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်..NLD ရပ်ကျေးညီလာခံမှာ ဗျာ….
နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်(တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့)က ၉၄ ရပ်ကွက်၊ ယုဇန ဥယျာဉ်မြို့တော် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် NLD ရပ်ကျေးညီလာခံ
ကျင်းပခဲ့ရာ အောင်မြင်မှုမရှိဘဲ ပွဲပျက်ခဲ့သည်။
ယုဇန NLD ကွဲနေသည့် သတင်းတွေကကြား နေရသည်။
ညီလာခံမတိုင်မီ တစ်ရက် လူငယ် ကျား၊မ (၂)ဦး ဂျာနယ်တိုက်ကို ဖိတ်စာလာပို့သည်။
ထူးခြားသည်က ရပ်ကျေး/မြို့နယ်ကော်မရှင်က ဖိတ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကွဲနေသော အစုအဖွဲ့တစ်ဖက် က ပုဂ်္ဂိုလ်တစ်ဦးအမည်ဖြင့် ဖိတ်ကြား
ညီလာခံစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ဟုကင်ပွန်းတပ်ထားသည်။ ညီလာခံနေ့တွင်
ညီလာခံ မစတင် မီ ကွဲနေသော အစုတစ်စုမှ ပုဂ်္ဂိုလ်များ၏ အမည်စာရင်း
စာရွက်တွေ ဝေနေတာ တွေ့ရသည်။ ကော်မရှင်က ၎င်းစာရွက် များဝေခြင်းသည် တရားဝင် ကော်မရှင် က ဝေခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိမိကြိုက်သူကိုသာ အဆိုပြု တင်သွင်းကြရန် ကြေညာသည် ကို ကြားရသည်။
ဂျာနယ်များသို့ ဖိတ်ကြားခဲ့သည့် ပုဂ်္ဂိုလ်ကလည်း မီဒီယာအချို့နှင့် ပွဲမစမီ အင်တာဗျူးနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ညီလာခံအပြင်အဆင်က အသွင်သဏ္ဍာန် ကောင်းသည်။လျို့ဝှက်ဆန္ဒပြုခန်းများ၊ မဲ ထည့်ရန် ပုံးများပါဝင်သည်။
ညီလာခံ စတင်ကျင်းပရာ ဖိတ်ကြားသူ သုံးရာကျော်၊ တက်ရောက်သူ
နှစ်ရာ့လေးဆယ် ကျော်ရှိ၍အထမြောက်ကြောင်းကြေညာကာ အဆိုပြုခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် တက်ရောက်လာသူများက လူ(၄၀)ကို အဆိုပြုခဲ့ကြသည်ကို အထဲကမှ ၁၁ဦး ကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ကြသည်။
ဤတွင် ပြဿနာက ၀င်လာသည်။ မဲလာထည့်ရန် အမည်ခေါ်ယူရာတွင် (၈)ယောက်တစ်တွဲ ခေါ်ရာ နှစ်ယောက် သုံးယောက်သာ ထလာကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင် မဲပေးသည့် အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ
လိုက်ရာ မဲမထည့် ရသေးသူများ ကျန်ရစ်နေသည်ဟု ဆိုကြ သည်။ အမည်များ မပါဝင်သဖြင့် ကျန် ရစ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
တစ်ယောက်တစ်ခွန်း ကန့်ကွက် ပြောကြားမှုများ ပြင်းထန်လာပြီး ကော်မရှင် တာဝန်ရှိသူများထံ ၀ိုင်းအုံလာကာ ၀ိုင်းဝန်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ကော်မရှင် တာဝန်ရှိသူများက နေရာတွင် ပြန်ထိုင် ကြရန်၊ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်
ပြောနေလျှင် ရှင်း၍မရကြောင်း၊ ငြိမ်သက်စွာနေပေးကြရန်၊မေတ္တာရပ်ခံ
ကြောင်း မဲထည့် လို့ရအောင် ရှင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ်
မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သော်လည်း လိုက်နာခြင်းမရှိသူက အများစုဖြစ်နေသည်။
မဲပေးရန် ကျန်ရစ်ခဲ့သူများတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်ရှိ
ကြောင်း လက်မှတ်မထိုးခဲ့သူများလည်း ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ပြည် သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် NLD ဒေါက်တာမျိုးအောင်က အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းသည့်အနေဖြင့် ““အမှားအယွင်း ရှိသွားတဲ့အတွက် အခု ဒီနေ့လုပ်တဲ့ပွဲက တော့
မအောင်မြင်ဘူး။သူတို့ အဆင့်ဆင့် တင်ပြပါမယ်။ (၇)ရက် ကြိုပြီး ဖိတ်ပါ မယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး စနစ်ကျအောင် ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ နောက်တစ်ပိုင်းက ဒီကိစ္စဖြစ်ရတာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်နဲ့ ပြန်စုံစမ်းပြီး သင့်တော်တဲ့ အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကျွန် တော် တင်ပြပေးပါ့မယ်။ ကော်မရှင် ကိုယ်စား ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါ တယ်””ဟု မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော NLD ပါတီဝင်များကို ပြောကြားခဲ့ရာ ပါတီဝင် များက အရေးယူပေးရန်နှင့် ညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မရှင်ကိုလဲလှယ်ပေးရန် ၀ိုင်းဝန်းအော်ဟစ်
ဒေါက်တာမျိုးအောင်အနေဖြင့် အဆိုပါစကားပြောကြားနိုင်ရန်အတွက် တက်ရောက်လာသော ပါတီဝင်များကို နားထောင်ပေးပါရန် အတန်ကြာ
မေတ္တာ ရပ်ခံပြီးမှ ပြောကြားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ဒေါက်တာမျိုးအောင် ပြောကြား အပြီးတွင် တက်ရောက်လာသူများက
ပြန်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် မဲမပေးရသေးသူ များ လက်မှတ်လာထိုးကြပါဟု ဆိုကာ လက်မှတ်များစုဆောင်းမှု ပြုခဲ့ကြသည် ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
အဆိုပါအချိန်တွင် ကိုသားလေးဆို သူက ခုံတစ်ခုံပေါ်တက်ကာ ““ဒီရွေး ကောက်ပွဲကတော့ လုံးဝယုတ်ညံ့စွာနဲ့ ပျက်စီးသွားပါပြီ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် တို့က ဒါကို လက်ခံလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်
ရွေးကောက်ပွဲ ကို ပြန်ခေါ်ကြမယ်။ ခေါ်တဲ့အခါမှာ လည်း ကျွန်တော်တို့က သိသာမြင်သာ အောင်လို့ ဖြစ်နေရပါမယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခု
ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ဘာ ဖြစ်လည်းဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကို””ဟု
ပြောဆိုနေစဉ်မှာပင် ပင်နီဝတ်ပါတီဝင် တစ်ဦးက လူအုပ်ကို တိုးဝင်လာပြီး ကိုသားလေးပြောနေသော မိုက်ခွက်ကို လုယူလိုက်စဉ် ၀ရုန်းသုန်းကား
ဖြစ်ကာ ဆွဲကြလွဲကြ ခုံနှင့်ပစ်သူကပစ်၊ မိုက်လု သွားသူနောက် လိုက်သူကလိုက်၊ တား သူက တားဖြစ်နေကြစဉ် ပရိသတ်အတွင်း၌လည်း အပြန်အလှန်ထိုးကြိတ်ခြင်း အချို့ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ညီလာခံပျက်သွားပြီးနောက် ကော် မရှင်နှင့်ပါတီဝင်အချို့ကို ယင်းနေ့တွင် ပင် လိုက်လံမေးမြန်းခဲ့ရာ ၀င်ရောက်အရွေး ခံသည့် ဦးထွန်းဝက ““ဒီ ညီလာခံမှာ ပြည် သူတွေဟာ အချိန်ပေးပြီး လာတက်ပါ တယ်။ ကထိန်နေ့ကြီးတောင်မှ သင်္ကန်း လှူတာတို့ ကျောင်းသွားတာတို့ မပြုဘဲ နဲ့ ညီလာခံကို တက်ပါတယ်။ ညီလာခံ တက်ရောက်သူပေါင်းက (၂၄၄)ဦးရှိပါ တယ်””ဟု ပါတီဝင်ပေါင်းက (၈၉၄)ဦး၊ သူတို့ကြေညာချက်အရ (၃၃၀)ဖိတ် ပါတယ်။ (၃၃၀)အပေါ်မှာ သူတို့က ရာ ခိုင်နှုန်းတွက်လိုက်တော့ ၇၃.၉၃ ရာခိုင် နှုန်းဆိုတော့ အထမြောက်ကြောင်း ဖြစ်သွားတယ်။
အဆိုတင်သွင်းမှုနဲ့ ထောက်ခံ မှုပြုပြီးတဲ့အခါမှာ အမှုဆောင်လောင်း (၄၀)ဦးထွက်လာတာပေါ့။ ဒါက မဲပေး ပြီးရွေးရမယ့်အဆင့်ရောက်သွားပါပြီ။ အဲဒီလို မဲပေးပြီးရွေးမယ့်အချိန်ရောက် တော့ မသမာမှုစမြင်ရတယ်။ ဘယ်အချိန် က စမြင်ရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လက် မှတ်ထိုးတဲ့စာရွက်က
ခေါ်တဲ့စာရွက် မဟုတ်တာကို တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော် အစည်းအဝေး
တက်တုန်းက သူတို့ attendance ယူတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒါကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်။ ခေါ်တဲ့အခါကျ တော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ စီနီယာအလိုက် မဟုတ်တော့တာသိတယ်။ ဘေးကို မေး ကြည့်တော့ ““ဟာ မင်းပျောက်ပြီ ထင် တယ်””တဲ့။ မကြာခင်ပဲ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်း ကနေ ပါတီဝင်က ကုန်ပါပြီလို့ ကြေငြာ လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်နောက် မှာ တို့ဘက်ကို ထောက်ခံပေးမယ့် ပါတီ ၀င်တွေက အများကြီးကျန်ပါ
သေးတယ်။ ရာချီကို ကျန်သေးတဲ့အခါကျတော့ မခံ မရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး
မေးမြန်းတဲ့အခါကျတော့ အဖြေက ထွက်ပေါ်မလာဘူး။ ကိုသားငယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ်္ဂိုလ်ဟာ စာရင်းမှားတယ်လို့ ကြေညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့
ပြည်သူ တွေဟာ ပိုပြီးတော့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာ တာပေါ့။ မမှားသင့်တဲ့ စာရင်းပဲ။ ကော် မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟာ ဒီအမှားမျိုး လုံးဝမှားခွင့် မရှိဘူး။ ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် ကျွန်တော်လူ တစ်ယောက်ကို မှားပြီး သတ်မိရင်လည်း ပုဒ်မတပ်ရမှာပဲ။ ကော်မရှင်လည်း ထို နည်းလည်းကောင်းပဲ။ ဒီအမှားကို မှားပြီး လုပ်မိတာနဲ့ပဲ NLD ပါတီကို လုံးဝ ထိ ခိုက်သွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ
အေးချမ်းသာယာရေး ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားတယ်။ နိုင်ငံတော် ကပေးထားတာ။ ဒီညီလာခံရွေးကောက် ပွဲကလေးတောင်မှ တရားဥပဒေ
စိုးမိုးမှု မရှိဘူး။ ညီလာခံအေးချမ်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ ရှိရင် NLD ကို ဘယ်လောက်ထိခိုက် သွားလဲ။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒါကို သိပ်ပြီး ၀မ်းနည်းတယ်။ ကော်မရှင်အပြစ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ရဲရဲလည်းရင်ဆိုင် ရဲ တယ်။ ကော်မရှင်အမှား၊ ကော်မရှင် အပြစ်၊ တမင်ကလာမှားအောင် လုပ် ထားတယ်။ ဒါ ကျွန်တော့်အမြင်ပဲ ဒီစာရင်းကမဲထုတ်တုန်းက စာရင်းဆိုရင် လည်း အားလံုးပါလာရမယ်။ ၈၉၄ ယောက်စလုံး တက်ရောက်သူဆိုရင် လည်း ၂၄၄ စလုံးပါရမယ်။ ဘာကြား စာရင်းလဲ၊ ဒါက ၀င်လာရတာလဲ၊ လူ တွေ ရန်ဖြစ်အောင် သတ်ဖြတ်ကြအောင် ဒါက ဖန်တီးလိုက်တာပဲ။ ညီလာခံပျက် ပြားအောင် လုပ်လိုက်တာပဲ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ပါတီပိုင်း
ကရော ဥပဒေပိုင်းက ရော ဆက်လက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာ ပါ””ဟု
NLD ဗဟိုသို့လည်း အချက်အ လက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုစာဖြင့် ဗီဒီယိုမှတ် တမ်းခွေပါထည့်သွင်းတင်ပြသွားမည်ဖြစ် ပြီး တိုင်း(သို့မဟုတ်) ဗဟိုမှ ကြီးကြပ်ကာ ညီလာခံ လာရောက်ကျင်းပပေးရန် တောင်းဆိုသွားမည်
ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
““ဒီမှာက လူတွေအချင်းချင်း နေရာ လုတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ဟိုလူ တွေကျတော့ နေရာလုစရာမရှိပါဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်သွား
နိုင်ပါလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော်တို့လည်း ယုံကြည်ထား တယ်””ဟု ၎င်းက
ညီလာခံမအောင်မြင်သဖြင့် (၉၄) ရပ်ကွက်ညီလာခံကိစ္စကို ဆိုင်းငံ့
မထားစေလိုကြောင်း ၉၄ ယုဇနနေ ပြည်သူ များမှာ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် လူဦး ရေများပြားသောကြောင့် မဆိုင်းငံ့ထား သင့်ကြောင်းလည်း ၎င်းကပြောသည်။
၀င်ရောက် အရွေးချယ်ခံခဲ့သည့် ကိုစိုင်းကျော်သူက ““ညီလာခံကျင်းပပြီဆို ရင် အခြားရပ်ကွက်တွေမှာရော၊ ညီလာ ခံရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရရော၊ ညီလာခံ ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ ပါတီဝင်အင်အား စာရင်းကို ညီလာခံ
မကျင်းပမီမှာ ကြိုပြီး ကြေညာရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညီလာခံ ကျင်းပပေးသွားတဲ့
ကော်မရှင်ကတော့ အဲဒီစာရင်းကို ကြိုတင်ကြေညာခြင်းမရှိဘူး။ အဲဒါကတော့ အားလုံး အသိပဲ။ ပရိသတ်အားလုံးလည်း အမြင်ပဲ။ အဲဒီလို ကြိုတင်ကြေညာခြင်းမရှိဘဲ သူတို့ဆီကို ၂၄၀ တက်ရောက်လာတဲ့
အခါကျတော့မှ သာလျှင် ၃၃၀ ဖိတ်ပါတယ်လို့ ကြေညာတာ။ အမှန်တကယ်က ညီလာခံကိုလာ ရောက် တက်ရောက်တဲ့စာရင်း၊ မကြေ ညာခင်မှာ ဘာကို ကြေညာပေးရမလဲဆို ရင် ညီလာခံကို ဖိတ်ကြားတဲ့ စာရင်းကို ကြေညာပေးရမှာပါ။ အဲဒါလဲ သူက ပထမပျက်ကွက်တယ်။ သူမှားတာဘာ ကြောင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်က ကျွန်တော်တို့အတွက်
နောက်ထပ်စဉ်း စားစရာ အချက်တစ်ချက် ထပ်ထွက် လာတာပေါ့။ ညီလာခံနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဒီနေ့လုပ်သွားတာက လပြည့်နေ့။လပြည့် နေ့နဲ့ ပတ်သက်လို့ ညီလာခံကို ကျွန် တော်စာတစ်စောင်ရေးတင်ပါတယ်။ လပြည့်နေ့မှာ လုပ်လို့ရှိရင် ကထိန်ရှိ တယ်။ စတုဒိဿာရှိတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဈေးရှိ တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပါတီဝင်တွေ စုံစုံ လင်လင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်း
မရှိနိုင်ဘူး။ အဲဒီအခါမှာ ညီလာခံရဲ့ အနှစ်သာရ မပြည့်နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်စာရေးပြီး တင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာက နောက်ကျပါ
သေးတယ်။ မြို့နယ် ကော်မ ရှင်က ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင်ပြောတယ်။ နောက် တိုင်းကော်မရှင်က ကိုသားလေး ကဒါကို အကြံပေးပြီးပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို သူတို့ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ အဲဒီ နေ့ကို ဘာကြောင့်ရွေးပြီး သူတို့ကျင်းပ ရသလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့တစ်ခုကောင်း တာပေါ့နော်။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကကော ညီ လာခံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို မဲပေးရ မယ်၊ ဘာကြောင့်မဲပေးရမယ်၊ ဘယ်သူ တွေကိုမဲပေးရမယ်၊ ညီလာခံကျင်းပ
ရခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ ရဖို့ရည်ရွယ်ချက် က ဘာလဲဆိုတာ ညီလာခံ
ကော်မရှင်က ညီလာခံသာ ကျင်းပပြီးစီးသွားတယ်။ လုံးဝ ပြောကြား
ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ သူတို့တွေ က တောက်လျှောက် ဆက်တိုက်ဆက် တိုက် တစ်ခုပြီးတစ်ခု မှားလာခဲ့တဲ့အချိန် ကျတော့ သူတို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်
အလုပ်တွေ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ နောက် မလုပ်ရ မယ့်ရက်မှာလည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ လုပ်ဖို့ အလုပ်တွေလည်း ညီလာခံထဲ ရောက်မှ ဘာကြောင့် ပျက်ကွက်သလဲ။ အဲလို ပျက်ကွက်တဲ့ကိစ္စတွေ ပေါ်လာပြီး ကာမှ
နောက်ထပ်အမှားကြီးတွေကို ဆက်တိုက်ဘာကြောင့် ကျူးလွန်သွား သလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာရှိလာတယ်။
NLDမြို့နယ်ညီလာခံကျင်းပရေး ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်ပြီး ဦးသိင်္ခက ညီလာခံပျက်ခဲ့ရခြင်းနှင့်ပတ် သက်၍ ““ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန် တော်က အခုလက်ရှိ မြို့နယ်ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ညီလာခံ
စည်းမျဉ်းအရ ကျွန်တော်တို့ (၉၄)ရပ်ကွက်ကို ရပ်ကျေး ကော်မရှင်တွေ
တောင် ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကို ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ရင် တာဝန်မရှိဘူး။ အခြားရပ်ကွက်တွေကနေ ပြောင်းလဲပြီး တာဝန်အလှည့်ကျပေးထားတာ။ တကယ့် တကယ် တာဝန်ရှိတာက ဒီ(၉၄)ရပ်ကျေး ကို ဦးစီးကျင်းပပေးတဲ့ (၈၈)ရပ်ကွက် ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင်မှာပဲ လုံးလုံးလျားလျား တာဝန်ရှိတယ်။ အခု ဖြစ် သွားတဲ့ ကိစ္စမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်။ မဲမပေးရ သေးတဲ့ လူတွေရဲ့ လက်မှတ်ကို လာထိုး ပါ၊ လာထိုးပါဆိုပြီး လှုံ့ဆော်တဲ့သူ့ရဲ့ လက်ထဲမှာလက်မှတ်
စုဆောင်းဖို့အတွက် စနစ်တကျ ချထားတဲ့ ဇယားနဲ့ စာရွက် တွေ အမြောက်အများပါလာတယ်။ ပါ လာတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားကလည်း ဒီလိုအနေအထားကို ဖြစ်မယ်လို့ ရည် ရွယ်ပြီးတော့မှ လုပ်တာလို့ သုံးသပ်လို့ရ တယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဒီ ၈၈ ရပ် ကွက်ရပ်ကျေးကော်မရှင်
ကို ကျွန်တော် တို့ ကိုယ်တိုင်က ယခင်ကတည်းက သံ သယရှိနေတဲ့အထဲမှာ ပါတယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကို အခု အတိုက်အခံ
လုပ်နေတဲ့ ဦးထွန်းဝတို့၊ ကို ကျော်သူတို့နဲ့ အမတန် ရင်းနှီးတဲ့ ပုဂ်္ဂိုလ် တွေမို့လို့ ဒီပွဲကြီးကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ် တိုင်က လုံးဝ သံသယရှိတယ်။ တိုင်းက ဦးဘိုဘိုဦးက ဒီကိစ္စကို အချိန်မီ မြန်မြန် အစီအရင်ခံစာရေးတင်ပေးပါတဲ့””ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၉၄ ရပ်ကွက် NLD ရပ်ကျေးကော် မရှင်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြတ်ပြီး ၀င်ရောက် အ ရွေးချယ်ခံခဲ့သူ ဒေါ်ဝင်းဝင်းချိုက ““ရပ် ကျေးကော်မရှင်က ကိုယ့်ရပ်ကျေးမှာဆို ရင် ကျွန်မတို့က ပြည်သူပဲ၊ ဘာမှ ဒီမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ကျွန်မတို့က ပါတီဝင် ကတ်ပြားတွေကို ပါတီဝင်တွေဆီ လက် ၀ယ်ရောက်ရှိအောင် ဖိတ်စာတွေ ဖိတ် ပေးရတယ်။ ကတ်ပြားတွေပို့ပေးရတယ်။ ညီလာခံဖြစ်မြောက်အောင် ကျွန်မတို့က အဆောက်အအုံတွေ၊ နေရာတွေ၊ ဧည့် သည်တွေ လာဖို့နေရာတွေ အားလုံးကို စီစဉ်ပေးရတာ။ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကျရင် ဘာမှ ၀င်ရောက်
စွက်ဖက်ခွင့်မရှိဘူး။ ၀င် ရောက်တော့ ရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိတယ်။ ဖိတ် ကြားထားတဲ့ လူစာရင်းကို လာကြီးကြပ် တဲ့ (၈၈) ရပ်ကွက်ကော်မရှင်
လက်ထဲကို ထည့်ရတယ်။ တက်ရောက်လာတဲ့ လူ စာရင်းကိုလည်း
ပေးရတယ်။ သူတို့က တက်ရောက်လာသူ စာရင်းနဲ့ ဖိတ်ကြား ထားသူ စာရင်းနဲ့ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိ ရင် အောင်မြင်ပါတယ်ဆိုပြီး သူတို့က ကြေညာပြီးတော့ မဲထည့်ဖို့ခေါ်ပေးရ တယ်။ သူတို့ အကုန်စီမံခွင့်ပဲရှိတယ်။ ကျွန်မတို့ရပ်ကျေးကော်မရှင်နဲ့ဘာမှ စီမံခွင့်မရှိဘူး။ အပေါ်ကလည်းမူချထား တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ မဲရမှုကလည်း သူတို့ ပြောသမျှပဲနေရတယ်။ ရပ်ကျေး ကော် မရှင်တိုင်း အဲဒီအတိုင်းပဲ။
ဒီနေ့ ပွဲမှာ တက်ရောက်မယ့် လူ ၃ ရာကျော်အတွက် စာရင်းတွေ အကုန်ပေးလိုက်ရတယ်။ တက်ရောက်လာတဲ့ လူစာရင်းကိုလည်း (၈၈)ရပ်ကျေးကော်မရှင်လက်ထဲကို ထည့်ပေးရတယ်။ တက်ရောက်သူ လက် မှတ်ထိုး လက်ခံတဲ့သူတွေရှေ့မှာပဲ တစ် ခါတည်း ထည့်ပေးတာ။ လက်ခံတဲ့သူ တွေကလည်း တခြားရပ်ကွက်ကပဲ လာ ကူကြတာ။ အဲဒီ စာရင်းတွေ အပ်လိုက် တာနဲ့ ကျွန်မတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။ ဘယ်သူ ရိုးသားတယ်၊ မရိုးသားဘူးဆို တာကတော့ ကျွန်မတို့ကတော့ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုပဲ တာဝန်ယူတတ်တယ်။ ကိုယ့် တာဝန်ဖြစ်တဲ့ ပါတီဝင်တွေဆီကို ပါတီ ၀င်ကတ်တွေပို့ပေးတယ်။ တက်ပါမယ်ဆို တဲ့သူတွေဆီကို ဖိတ်စာပို့ပေးတယ်။ ဒီ ဘက်အပိုင်းမှာ မှားသလား၊ မှန်သလား ဆိုတာတော့ ကာယကံရှင်လုပ်တဲ့သူတွေ ပဲ သိမယ်။ မှားတာဆိုရင်လည်း (၈၈) ရပ်ကျေးက လုပ်တာပဲ မှန်တာဆိုရင် လည်း သူတို့လုပ်တာပဲ။ ညီလာခံမလုပ် ခင်မနေ့က ကိုစိုးမိုးကျော်သူ ဦးထွန်းဝနဲ့ ပါတီဝင် ၁၀ ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ညီ လာခံကို နောက်ရွှေ့ပေးပါဆိုပြီး စာလာ တင်တယ်။ ညီလာခံလုပ်မယ့်
ရက်ကို အထက်ကို ၁၀ ရက်ကြိုတင်ရတယ်။ ၈ ရက်လောက်ကြိုပြီး ချပေးတယ်။ ၇ ရက် ကြိုပြီး ဖိတ်စာဖိတ်ရတယ်။ ဒီလို အခြေ အနေမှာ နက်ဖြန်လုပ်ရမယ့်ပွဲမှာ ဒီနေ့ လာပြီး ဒီပွဲနောက်ဆုတ်ပေးပါဆိုိပြီး လာ ဖျက်တဲ့ အပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ လုံးဝ သံ သယရှိတယ်။ သူတို့အစီအစဉ်တကျနဲ့ ဒီပွဲကို ဖျက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ညနေပိုင်းမှာ သူတို့က အစည်းအဝေး ရှိတယ်ဆိုပြီး မိုက်နဲ့လိုက်ကြေညာပြီး ခေါ်တယ်။ သူတို့ ဘာပြောတယ်
ဆိုတာ ကတော့ မသိဘူး။ အခုဖြစ်ပြီးတဲ့ အချိန် မှာလည်း မဲမထည့်ရသေး
တဲ့သူတွေကို လက်မှတ်လာထိုးလို့ သူတို့ ချပေးတဲ့ စာ ရွက်ဟာ Planဆွဲပြီးသား စာရွက်တွေ ဖြစ်နေခြင်းကို ထောက်ခြင်းအားဖြင့် သူ တို့ဟာဒါကို ကြိုတင်ကြံစည်ထားတာလို့ ကျွန်မတို့က စွပ်စွဲတယ်။ ရိုးရိုးသားသား မဲလာထည့်တဲ့သူဆိုရင် အဲဒီလို (စာရင်း ဇာယားကွက်
ချထားသော) စာရွက်မပါ လောက်ဘူး။ ပါလာစရာအကြောင်းလဲ မရှိဘူး။ အကြံအစည်ရှိလို့သာ ဒီစာရွက် ကို ယူလာတာလို့ထင်တယ်။ အဲဒါကျွန်မ အမြင်ပဲ။ ကျွန်တာကတော့ ရိုးသား တယ် မရိုးသားဘူးဆိုတာ (၈၈)ရပ်ကျေး ပဲသိမယ်။ ပါတီဝင် ၈ ရာကျော်ရှိတဲ့ အထဲက ၃ ရာကျော်ပဲဖိတ်တာက ပါတီ ၀င်ကတ်သွားပေးတဲ့အခါမှာ ညီလာခံ တက်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိမေးတယ်။ တက်မယ်ဆိုတဲ့သူ စာရင်းကို ယူထား တယ်။ ၇ ရက်အလိုမှာ ဖိတ်စာပို့ပေး တယ်။ လပြည့်နေ့ လုပ်တယ်ဆိုတာက ဒီမှာ အလုပ်သမားတွေများ
တဲ့အတွက် အလုပ်ပိတ်ရက် ရွေးလိုက်ရတာ။ ကျန်တဲ့ ရပ်ကွက်တွေက ကြိုတင်ထားကြတော့ ကျွန်မတို့က စနေ၊ တနင်္ဂနွေရက်မျိုး မရ တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ပါ။ အချိန်ကိုလည်း ၁၂ နာရီလုပ်လိုက်တယ်။
မနက်ပိုင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား ဘာသွား ပဒေသာပင်ပို့ပြီးချိန် ၁၂ နာရီ ဆို အားကြပြီဆိုပြီးရွေးလိုက်တာ ဖိတ် ကြားတဲ့စာရင်းတွေ၊ ပါတီဝင်တွေက ကျွန်မတို့ဆီမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ဒေါက် တာ ဖြူဖြူခိုင်အိမ်က ကွန်ပျူတာမှာလည်း ရှိတယ်။ ၂၅ ရက်ကလည်း ဦးကျော်သူ တို့က ဦးထွန်းဝအိမ်မှာလုပ်တဲ့ အစည်း အဝေးမှာ ပါတီဝင်တိုင်း အိမ်ကို ဖိတ်စာ နဲ့ ဖိတ်တယ်။ အဲဒါ NLD ပါတီက ကျွန်မတို့ ရပ်ကျေးကော်မရှင်မှအပလုပ် ခွင့်မပေးထားပါဘူး။ ဒါကိုကြည့်ရင် ဒီနေ့ စာရင်းတွေ ဘယ်ကထွက်နိုင်
ပါသလဲ။ ဘယ်ကရသလဲ။ ကျွန်မတို့တကယ်ပေး တဲ့ စာရင်းဟုတ်မဟုတ်
ဆိုတာ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ သူတို့လက်ထဲ
ရောက်မှ ကျွန်မတို့ ပေး ထားတဲ့ တကယ်စာရင်းဟုတ်မဟုတ်ကို
ကြော်ငြာတယ်၊ မကြော်ငြာဘူးဆိုတာ ကျွန်မတို့ မေးခွင့်လည်းမရှိဘူး။
သိခွင့် လည်းမရှိဘူး။ ကျွန်မတို့ကိုလည်း ဘာမှ မဖြေသွားဘူး။ အဲဒီ အဖြစ်အပျက်ဖြစ် ပြီးတာနဲ့ ၈၈ ရပ်ကျေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစိန်လုံးဝ ကျွန်မကို အတွေ့အခံ ဘဲ ပျောက်သွားတယ်။ စာရွက်တွေလည်း သူတို့ပဲယူသွားတယ်။ ကျွန်မတို့ကိုဘာမှ မပြသွားဘူး။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မတို့ ပေး ထားတဲ့ စာရင်းလား၊ သူတို့ဟာသူတို့ လုပ်ပြီး ယူလာတဲ့စာရင်းလားဆိုတာ ကျွန်မမပြောနိုင်ဘူး””ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
NLD ပါတီဝင်မဟုတ်သော်လည်း ညီလာခံသို့တက်ရောက်ခဲ့သည့်
ပြင်ပ ကျောင်းဆရာ ဦးကျော်သာ(ခ)မင်းတေဇက ““ကျွန်တော့်အမြင်
ကတော့ တာဝန်ယူပြီး ဆောင်ရွက်ရတဲ့ ပုဂ်္ဂိုလ်တွေက တာဝန်ပိုင်း
ဆိုင်ရာကို ကျေပွန်အောင် မထမ်းဆောင်လို့ ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင် တယ်။ ဒါက ပါတီတွင်းရွေးချယ်ပွဲဖြစ်လို့ လက်ရှိလည်း ပါတီမှာ အရွေးချယ်ခံထား ရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းရှိ တယ်။ ညီလာခံကို လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ကိုယ်တိုင် တက်တယ်။ ညီလာခံမှာ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက် ကြောင့် ညီလာခံပျက်သလိုမျိုးဖြစ်သွား တယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်သွားတဲ့ အပေါ်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ မျိုးအောင်ကိုယ်တိုင်က နောက်တစ်ပွဲ ထပ်လုပ်ဖို့ ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်
respect ကတော့ ရှိရမယ်။ ပါတီဝင်အချင်းချင်း အောက်ခြေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီမှာ အပြန် အလှန်လေးစားမှုသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ရုန်း ရင်းဆန်ခတ်
ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ကိုယ်စားလှယ်ကြီး
ပြောပြီးတဲ့နောက် အားလုံး လက်ခံသွား ပြီးတဲ့နောက်မှာ ထပ်ဖြစ်တဲ့ အဓိကရုဏ်း ကတော့ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် လေး စားမှုတွေ အားနည်းနေတယ်လို့ ကျွန် တော်မြင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ တွေက political knowledge အတော် လေး အားနည်းနေသေးတယ်လို့ ပြော ချင်တယ်။ NLDပါတီဝင်တွေ ပြောပြော နေတဲ့ အမေကို တကယ်ချစ်တယ်
ဆိုရင် ကော်မရှင်ကလည်း စေတနာပါပါ ဆောင်ရွက်မယ်၊ လူတွေလည်း စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်စ ရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ရွေးချယ်ခံတွေကလည်း ငါ နေရာရရှိရေးဆိုတဲ့ အတ္တကို ရှေ့တန်း တင်ပြီးတော့ သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ု မို့လို့လည်း
ဒီလို ထိန်းသိမ်းလို့မရတဲ့ အ နေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင် တယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ လုပ်စား မယ့်သူတွေဟာ တကယ်တမ်းသာ
စေတနာပါမယ်ဆိုရင် မလုပ်စားပဲနဲ့ ပြည်သူ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကို ပွင်လင်းမြင် သာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစား ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှ အလုပ် ကပေးသော နေရာကို လက်ခံပါလို့
ပြောချင်တယ်။ အလုပ်ကပေးတဲ့ နေရာ ကို လက်မခံဘဲနဲ့ နေရာအတွက်ပဲ အ လုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပြဿနာ မျိုးတွေဟာ ဒီနေရာမှာမှ မဟုတ်ဘူး။ နေရာတိုင်းနေရာတိုင်း၊ ဒီပါတီမှ မဟုတ် ဘူး။ ပါတီတိုင်း ပါတီတိုင်း၊ ဒေသတိုင်း၊ ဒေသတိုင်းမှာတော့ ဖြစ်နေဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်””ဟု ၎င်း၏ အမြင် ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ညီလာခံသို့တက်ရောက် ခဲ့သည့် ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်နေ ဦးလှမိုးက ညီလာခံပျက်ခဲ့ရခြင်းအပေါ် ““ဒီဥစ္စာဖြစ်တာ ဒေါက်တာမျိုးအောင် NLD(ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) ပြောပြီးပြီ။ ဒေါက်တာမျိုးအောင်ပြော ပြီးတဲ့အခါမှာ ထပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းက အမှန်က သူတို့စည်းလုံးမှုမရှိတာ။ စည်းလုံးမှုမရှိတဲ့ အပိုင်း၊ ပါတီထဲမှာကွဲနေ တာ။ ကွဲနေတဲ့အခါကျတော့ တစ်ဖက် ကနေ အမြင်စောင်းပြီးတော့ ဒီဥစ္စာကို ထပ်ပြီးတော့ ဖွလိုက်တာပဲ။ ဒါပဲ။ ဒီချို့ ယွင်းချက်ကို ဒီအားနည်းချက်ကို ထပ်ပြီး မီးမောင်းထိုးပြ
လိုက်တော့ ကျန်တဲ့လူတွေ မထိန်းနိုင်ဘူး။ အဲဒါကနေ ပြဿနာက မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်သွားတာ””ဟု ၎င်း အမြင်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံများကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းရာတွင် မြန်မာလူထု၏ ခေါင်းဆောင်ပီပီ စံနမူနာပြ ဖြစ်သင့် ပါတယ်။ သွားလေရာ၊ နေရာတိုင်းမှာ မြန်မာဆန်ဆန် ၀တ်ဆင်ထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဟန်ပန်ကို မြန်မာအမျိုးသမီးထုတစ်ရပ်လုံးက သဘောကျနေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်ရှင် ဆိုပြီး အမျိုးသမီးထုအတွင်းမှာ ရေပန်းစားနေပါတယ်။ တစ်ချိန်သောအခါက နိုင်ငံခြားသားကို ယူခဲ့ပေ မယ့် အခုအခါမှာတော့ တကယ့်ကို မြန်မာဆန်လှပါပေတယ် ဟူသော ချီးမွမ်းထောပနာပြုသံများသည် ပြည်သူများအတွင်း ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တတွေ လုံးဝအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခု၊ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတွေ့ မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ အံ့သြခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ မပြောရက် မနှိုင်းရက်သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောကျီးပါလား... ဘယ်လိုပဲ ဒေါင်းယောင်ဆောင်ထားပေမယ့် အချိန်တန်တော့လည်း ကျီးရဲ့ဇာတ်သရုပ်ဟာ ပေါ်လာတာ ပါပဲဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာမိပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပြောပြော၊ ဓလေ့ပြောပြောတစ်ဦး နဲ့တစ်ဦး ဖက်လဲတကင်း နမ်းရှုံ့နှုတ်ဆက်တာ ဆန်းဆန်းပြားပြား မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ်မှာတော့ ဒီလိုမျိုးနှုတ်ဆက်ခြင်းဟာ လွန်စွာအကျည်းတန်အရုပ်ဆိုးလွန်းလှပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့မှာ တစ်စိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ် ယောက်ဖက်ကြ၊ နမ်းကြတာဟာ လင်မယားဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာပဲရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာတောင် မင်းသားမင်းသမီးတွေ ချစ်သူရည်စားဖြစ်နေပါစေ..နမ်းတဲ့အခန်းမပါ ရှိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အသည်းစွဲကြိုက်နေတဲ့ ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာ နမ်းတဲ့အခန်းပါရင်တောင် မြန်မာ့အသံနဲ့မြ၀တီရုပ်မြင်သံကြားတို့က တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒီအခန်းတွေကို ဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောပါပဲ။
အခုဟာကတော့ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ဖက်နမ်းလို့တဲ့.. ဆိုတဲ့သတင်းဟာ အထူးခြားဆုံး သတင်းတစ်ပုဒ်လို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနားမှာမှီခိုနေတဲ့ ဦးဝင်းတင်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ မုဆိုးမတစ်ယောက်ကို သမ္မတကနမ်းတာ ဘာဆန်းလို့လဲ.. လို့ဆင်ခြေပေးချင်ပေးနေမှာပါ။ မြန်မာလူထုပရိသတ်ရဲ့ အလယ် မှာတော့ ဒါဟာဆန်းကြယ်ပါတယ်။ အမြင်မသင့်တော်လှပါဘူး။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို အလေးမထား တာ၊ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုခုတိုင်ကိုင်စွဲနေတာကို ပြသလိုက်တာပါပဲ။
အနောက်တိုင်းက အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် လာရောက်လည်ပတ်လို့ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရ သူ့ယဉ်ကျေးမှု အတိုင်းလိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရပါတယ်လို့ဆင်ခြေပေးကြမယ်ဆိုရင်လည်း.. ပြောပါရစေ.. မိန်းမသားချင်း အတူတူ... ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စယင်လတ်ရှင်နာဝပ်ကျတော့ အိုဘားမားရဲ့ အနမ်းကိုဘာလို့မခံတာလဲ။ သူနဲ့လဲ တွေ့တာပါပဲ။ သူလဲ သူတို့ ထိုင်းပြည်သူတွေချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ပါ။ ပြောရမယ် ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးချင်းအတူတူ ကျွန်တော်တို့မြန်မာခေါင်းဆောင်ထက် ထိုင်းအမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်ကယဉ်ကျေးမှုကို ပိုမိုစောင့်ထိန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြလိုက်တာမို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေနဲ့ရင်ထဲမှာအောင့်သက်သက်ကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။
မြန်မာဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ခွေးချင်းကိုက်တာတောင်မှ ကိုယ့်ခွေးကို အနိုင်ရချင်တာပါ။ မြန်မာ့ စိတ်ဓာတ်ကနေရာတကာမှာ အနိုင်ရချင်တဲ့လူမျိုးတွေပါ။ အားကစား ဆိုလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ ကိုယ်က ဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားထက် ကိုယ်ကဂိုးသွင်းလိုက်ရတာ(နိုင်လိုက်ရတာ)ကို လိုလားကြတာပါ။ တို့မြန်မာနိုင်ပြီဆိုတာမျိုးကို ကြွေးကြော်ချင်ကြသလို အနိုင်ဆိုတာမျိုးကိုပဲ လိုလားတာပါ။ အခုတော့ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရယင် ကျွန်တော်တို့တစ်ဂိုးရှုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ....။ တကယ်ဆိုကျွန်တော် တို့တစ်ဂိုး မရှုံးရအောင် ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဖက်လဲတကင်း ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့လိုက်ရမှာပါ။ သူရဦးရွှေမန်းတို့၊ ဦးခင်အောင်မြင်တို့ကကော ဟီလာရီကလင်တန်ကို ဘာဖြစ်လို့ ၀ိုင်းပြီးမနမ်းလိုက်ကြလဲ... လို့ပဲ အော်ဟစ်မေးလိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။
အမှန်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့အနားမှာဝိုင်းရံနေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာ ရှေးရိုးမြန်မာကြီးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ဆိုရင်လဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူ့လောက်စာတတ်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရဦးတင်ဦး(ငြိမ်း) ဆိုလဲ တစ်ချိန်က နိုင်ငံတော်မှာ ဒုတိယခေါင်းဆောင်နေရာမှာ နေလာတဲ့သူပါ။ သူတို့တွေရှိနေရက်သားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီး အမှားအယွင်း ဖြစ်ရတာကို စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီးကပဲ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဘယ်သူ့ စကားကိုမှ နားမထောင်ဘဲ နေတာလား၊ ဦးတင်ဦးတို့ ဦးဝင်းတင်တို့ကပဲ မပြောရဲကြတာလား။ ပါတီအဖွဲ့အတွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီမရှိကြလို့လား။ ဒါဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမည် တပ်ထားတာလဲ.. လို့ပင်မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒီလောက်အကျည်းတန်၊ အရုပ်ဆိုးလှသော အဖြစ်အပျက် ကြီးကြီးမားမားကြီးကို လူမြင်ကွင်းမှာ အဖြစ်ခံရတာဟာ ဒီမိုကရေစီဘိုးဘိုးများဖြစ်ကြတဲ့ ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဦးတင်ဦးတို့က ကြိုတင်တားသင့် ပါလျက် အဘယ်ကြောင့်မတားဘဲ လွှတ်ပေးထားသည်ကို စဉ်းစားမရဖြစ်မိကြောင်းပါခင်ဗျာ......။
ရည်ညွှန်း - https://www.facebook.com/moeminthar.gyi
(ဒို့ တဏှာအစည်းအရုံး မှာ အောက်ပါအတိုင်းကြေငြာထားလေရဲ့ ။)
လွှတ်တော်အမတ် ရှေ့နေ ဦးသိန်းညွှန့် နှင့် နေပြည်တော်ရှိ မာဆပ်တစ်ခု မှကောင်မလေး မူဗီထွက်ပေါ်နေကြောင်း သတင်းအတိအကျရထားပါသည်။
ဖိုင်ဆိုဒ် 50MB လောက်ရှိပြီး။ အစိမ်းရောင်အခန်းဆီးများကာထားသည့် အခန်းတွင်ဟုသိရပါသည်။ ချောင်းရိုက်ထားသော မူဗီဖြစ်သော်လည်း အရုပ်အသံများအထူးကြည်လင်ပြတ်သားသည်ဟု သိရပါသည်။ မိတ်ဆွေများကို တင်ပေးချင်သော်လည်း လက်ထဲတွင်မူဗီမရှိဖြစ်နေပါသည်။ မူဗီလက်ဝယ်ရှိသော မိတ်ဆွေများ မေးထဲသို့ ပို့ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကချင်ပြည်သူတွေ အတွက် ဘယ်သူက သူပုန်လဲ ဘယ်သူကအစိုး၇လဲ။
ဗလမင်းထင်တံတားဆိုတာနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ကလို့ သိကြမှာပါ။ ဒီတံတားကြီးဟာ မြစ်ကြီးနားမြို့ Shatapru ကျေးရွာနဲ့ မိုင်းနားကျေးရွာကြားရှိ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ဖြတ်ပြီးဆောက်ထားပါတယ်။ ဒီတံတားကြီးဆောက်တဲ့အချိန် ပြည်သူတွေရဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေ အတော်များများဖယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။Shatapru ကျေးရွာ သီတာအေးရပ်ကွက်နဲ့ မိုင်းနားဆိပ်ရပ်ကွက် က ပြည်သူတွေ မတရားခြံမြေတွေ ဖယ်ပေးလိုက်ရ ပြီးအစိုးရပြန်ပေးတဲ့ မြေနေရာတွေကတော့ ရေ၀တ်ပြီး ဘာမှစိုက်စားလို့မ၇တဲ့ နေရာတွေ မြေရိုင်းတွေ။ အိမ်တွေပြန်ဆောက်ပေးဖို့နေနေသာသာ ဘာတန်ဖိုးမ၇ှိတဲ့ မြေတွေပြန်ပေးတာတောင်ကျေးဇူးတင်ရမလို ရှိခိုးးရမလိုပါပဲ။ ဒီတံတားကြီးဆောက်ပြီးလို့ ပြည်သူတွေ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် ဟိုဘက်ကမ်းဒီဖက်ကမ်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်သွားလာရတာများအဆင်ပြေပြီအောင်းမေ့တာ အရင်ကူးတို့နဲ့သွားလာရတာတောင် ပို လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်သလို စိတ်ချမ်းသာရတာအမှန်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တံတားကြီးပေါ်မှာ နေရာယူထားတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့စည်းတွေများလွန်း၊ အပြိုင်အဆိုင်အလုအယက် ကောက်ခံနေတဲ့ အခွန်တွေဆိုတာ ပြည်သူတွေကို ဒမြတိုက် နေတာကျနေတာပဲ။ ဒီတံတားကြီးမှာ တာဝန်ကျဖို့ အပြိုင်အဆိုင်အကြီးအကဲတွေဆီ ဖားရပြုရတာလည်း မြင်မကောင်းရှုမကောင်း။ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို ဒီတံတားကြီးမှာ တပ်ထိုင်ဖို့ တပ်ရင်းမှုးတွေ ပေးပို့ဖားရတာလည်း တစ်လကို သိန်း၆၀၀ထက်မနည်းပေးဆောင်ရတယ်။ တံတားပေါ်မှာ အာဏာအ၇ှိဆုံးကတော့ စစ်တပ်။ မော်တော်ယဉ်ဌာန၊သစ်တော်ဌာန၊စည်ပင်ဌာန၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊ရဲဌာန၊အခွန်ဦးစီးဌာနစသဖြင့်ဌာနပေါင်းစုံက ၀န်ထမ်းတွေ စီးပွားရှာ အမြတ်ထုတ်နေတာက လွန်လွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဖြတ်သန်းသွားလာဖို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေက ကိုယ်နိုင်ငံ ကိုယ့်ဒေသမှာ အဲ့ဒီလာက်ခက်ခဲပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူထင်ပါ့မလဲ။ ပြည်သူတွေအဖို့ တောင်ယာလယ်တွေဆိုတာက နဂိုကတည်းက ဗလမင်းထင်တံတားရဲ့ ဟိုဖက်ကမ်းဆိုတဲ့ မိုင်းနားရွာမှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်။ လယ်ယာပြီးလို့ စပါးတွေကို ဒီဖက်ကမ်းသယ်လာဖို့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အနေအထားက ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေကို ပေးရကမ်းရ အခွင့်တောင်းနေရတာတွေက ဆိုးဝါးလွန်းလှတယ်။ ပြက္ခဒိန်တွေကို မတန်တဆပေးပြီး ၀ယ်၇တာကလည်း စိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းလွန်းတယ်။ နွေရာသီ စပါးပြန်ချောစားတော့ မိုင်းနားကို စပါးပြန်သယ်တော့ တရုတ်ကို ရောင်းမှာဆိုးလို့ဆိုပြီ စစ်တပ်က မဖြတ်ခိုင်းပေးဆောင်ရတဲ့ငွေက ဆန်ဝယ်စားရတာထက်ဆိုး။
၀ိုင်းမော်မြစ်ကြီးနား ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ အိမ်ဆောက်လို့ သစ်တွေ ဟိုဖက်ကမ်းဒိဖက်ကမ်းသယ်ဖို့ ဒီတံတားကြီးကို ဖြတ်ရတာ ရာဇ၀တ်မှုပဲကျုးလွန်သလို။ သစ်တစ်ချောင်းတောင်ဖြတ်လို့ မရဘူးတဲ့။ ဒီတံတားကြီးပေါ်က ဌာနဆိုင်ရာဆိုတဲ့သူတွေက စစ်ဆေးမေးမြန်းလိုက်တာ ခြိမ်းချောက်ငွေညစ်လိုက်ကြတာ။
ပြည်သူတွေ ခရီးသွားလာကူးသန်းရောင်းဝယ်ကြတာကို တော့ မှောင်ခိုပဲလုပ်စားနေသလို။
ည ဆိုတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ ဒီတံတားကြီးပေါ်က ဌာနဆိုင်ရာတွေ အပြိုင်အဆိုင်အလုအယက် မျက်လုံးကြီးတွေတစ်ဝင်းဝင်းနဲ့ လောဘမော်ဟတွေ ဝေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ညဆိုတဲ့ အချိန်က သူတို့ အတွက် ငွေတွင်းကြီးဆိုလည်းဟုတ်၊ အလုပ်လုပ်လို့ အကောင်းဆုံးအချိန်အပျော်ဆုံးအချိန်ပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နေ့လည်က မိဘပြည်သူတွေကို ဆန်စပါးတရုတ်ပြည်ကို ရောင်းမှာဆိုးလို့ ဆိုက်ကားနဲ့တောင်မဖြတ်ရဆိုတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာက လူတွေ ကွန်တိန်နာကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ အစီးရေမနည်းမနော် ကို ဖြတ်ခိုင်း မှတ်တဲ့သူကမှတ်ဌာနတိုင်းကအလုပ်ကိုရှုပ်။ နေ့လည်က မိဘပြည်သူတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်လို့ သစ်တွေ ဆိုက်ကားထော်လာဂျီတွေနဲ့ သယ်တာကို မသယ်ရဆိုတဲ့ သူတွေက ညဆို သစ်ကားကြီးတွေနဲ့ အစီးရေတစ်ရာ နှစ်ရာ အပြိုင်အဆိုင်မှတ် ။ဒီတံတားကြီးကို ဖြတ်တရုတ်ကို သယ်နေတာက ရင်နာစရာ။ မော်တော်ယာဉ်မောင်းတွေက မြန်မာစကား၊ကချင်စကားတစ်လုံးမှမတတ်တဲ့ သူတွေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မြစ်ကြီးနားကနေတရုတ်ပြည်ထိသယ်နေတာလဲ။ ဗလမင်းထင်တံတားမရောက်ခင် သီတာအေးဘုန်းကြီးကျောင်းက သစ်တွေ သိုလောင်ထားတဲ့နေရာပေါ့။ မိဘပြည်သူတွေက အိပ်စက်ခြင်းကောင်းကောင်းမအိပ်ရ၊ ကားသံ၊သစ်သယ်တဲ့ အလုပ်သမားတွေ အောင်တဲ့အသံဆူညံနေတာပဲ။
ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ့်ဒေသကလူတွေ ခရီးသွားလာတာကို ကြတော့ မသင်္ကာသလို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်မှတ်ပုံတင်ကို စစ်လိုစစ်။ ဟောမြန်မာစကားတစ်လုံးတောင်မသိတဲ့သူတွေက ကိုယ်ဒေသမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့် ရောက်လာရတာလဲ။ ဗမာစကားမတောက်တစ်ခေါက်တတ်တဲ့ တစ်ရုတ်မက ငါ့မှတ်ပုံတင်က စစ်စစ်၊ ၂၅သိန်းတောင်ပေးထားရတာဆိုပြီး ရဲကို ပြန်ပြောလို့။
ကချင်ပြည်က ထွက်သမျှကျောက်စိမ်းတွေ မြန်မာပြည်ကောင်းဖို့ ဘယ်နေရာကနေဘာတွေ လုပ်ပြီးပြီလဲ။
ဖားကန့်မှာ ဗမာစကားမတတ်တဲ့ သူတွေက ဘယ်သူတွေရဲ့ အခွင့် အာဏာနဲ့ လုပ်ငန်း၇ှင်ကြီးတွေ ဖြစ်နေတာလဲ။
ဒေသခံမြန်မာနိုင်ငံသာတွေ အကျိုးဘာတွေလုပ်သလဲ။ ဖားကန်ကကျောက်တွေကို တောင်တွေဖြို၊မြေတွေတူး ရေမြေတောတောင်သဘာဝ ပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးပြီး ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းပြန်လည်မွမ်းမံဖို့ မစွမ်းဆာင်ပေးနိုင်တဲ့ အစိုးရကို ဘာလို အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ ကြည့်ပေးရမလဲ။
လမ်းတံတားတွေ ကို မသိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက အစိုးရလုပ်တယ်ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ ကချင်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘယ်သူ ကျောက်ကောင်းမအောင်လိုက်နဲ့ အစိုးရက လမ်းတံတားတွေဆောက်ခိုင်းကျောင်းတွေဆောက်ခိုင်းနဲ့ နိုင်ငံတော် အခွန်တွေက မဆောက်ပဲကချင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ စည်းစိမ်တွေကို မနာလိုမရှုစိမ်အမြစ်ဖြုတ်၊အမည့်ချွေချွေပေးနေတာ နာကျင်ရင်နာစရာပါ။ တရုတ်တွေကုလားတွေ ကတော့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပှုးပေါင်းပြီး ချမ်းသာလွန်းမက ကြီးပွားလွန်းမက လမ်းတံတားဆိုတာ သူတို့နဲံ မဆိုင်ဘူး။ဒီလို အကျင့်ပျက်ချစားလွန်းတဲ့ အစိုးရကို ကချင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို အားကိုးမလဲ။
မိမိပြည်သူတွေ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်စားသောက် တာကိုကြတော့ ရာဇ၀တ်သားလို စစ်စစ်ဆေးဆေးနဲ့ အမှန်တကယ်တရုတ်ကို သယ်ယူရောင်းစားအမြတ်ထုတ်နေတာတွေကြတော့ အစိုးရဘက်တော်သားဆွေမျိုးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ကြီးပဲ။ ဒေသခံပြည်သူတွေဆိုတာက ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာ ပြားပြားဝတ်မတရားခံနေရတာတွေက နာကျင်စရာနဲ့ နာကျဉ်းစရာ။
ကချင်ပြည်သူတွေကိုယ့်မြေကိုယ်ရေကိုယ့်ဒေသမှာ ဘောင်ကျဉ်းလာ ရှာဖွေစားသောက်အသက်ရှင်ခက်လာတာတွေက မခံချင်စိတ်နဲ့ တော်လှန်မှုကို ဖြစ်စေလာတဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပဲ။
ဒီနေ့ ကေအိုင်အေတွေ ရဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ်ရပ်တည်ချက်က ကချင်ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အရိပ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဆို ကချင်ပြည်သူတွေ ကေအိုင်အေကို ထောက်ခံအားပေးတာ မှန်ကန်တဲ့ ထောက်ခံမှုတစ်ရပ်ပဲ။ ဒီလိုပဲ မြန်မာအစိုးရက ကချင်ပြည်သူတွေအပေါ်ထားတဲ့ရပ်တည်ချက် က ကချင်ပြည်သူတွေ အတွက် ကောင်းမွန်တယ်ဆို မြန်မာအစိုးရကလည်းကချင်ပြည်သူတွေရဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ပါပဲ။ သေချာတာက မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကချင်ပြည်သူတွေအပေါ်ထားတဲ့ ရပ်တည်ချက်က အစဉ်အလာ သမိုင်းကြောင်းအရ ရိုးသားမှုမှန်ကန်မှု မရှိခဲ့လို့ ယနေ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ ပြသာနာတက်နေတာက ဘယ်သူတွေရဲ့ အလွန်လဲ။ကချင်ပြည်သူတွေကို ကချင်မြေမှာနေလို့မရအောင် လုပ်နေတာက ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ။ ကေအိုင်အေတွေ ပြည်သူတွေ အတွက် မကောင်းတဲ့ သူတွေဆို ပြည်သူတွေကမြန်မာအစိုးရနဲ့ ပူပေါင်းပြိးကေအိုင်အေကို အမြစ်ပြတ်ချေမုန်းဖို့ ဘာအကြောင်းကြောင့် နှောင့်နှေးတုန့်ဆိုင်းနေမှာလဲ။ အဲ့ဒီလို့ပဲ မြန်မာအစိုးရက ကချင်ပြည်သူတွေ အတွက် မကောင်းရင် ကချင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို ကေအိုင်အေနဲ့ ပှုးပေါင်းတော်လှန်ဖို့ ဘာအကြောင်းကြောင့် တွန့်ဆုတ်ရမှာလဲ။ ဘယ်အစိုးရမဆို ပြည်သူတွေ ရဲ့ အခြေခံလူတန်းစေ့နေထိုင်အသက်ရှင်မှုကို အာမခံချက်ပေးရင် ပြည်သူတွေ ရဲ့ လိုလားတဲ့ အစိုးရပဲ။ခု ကေအိုင်အေက ပြည်သူတွေ အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ မှုဝါဒတွေ ပြည်သူတွေ ကို အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေ သေအချာအခိုင်အမာ လုပ်ဆောင်နေတယ် ညှိနိုင်းနေတယ်ဆိုတာ ကချင်ပြည်သူတွေသာမက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးနိုင်ငံတကာကို ဘာတစ်ခုမှဖုံးကွယ်ထားချင်းမရှိ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေတာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ သိနေတယ်၊မြင်နေတယ်၊ကြားနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းစစ်ကို လိုလားလွန်းလို့ ဒုက္ခကို ရင်ဝယ်ပိုက်သားကဲ့သို့ ချစ်ခင်လွန်းလို့ မှမဟုတ်တာ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဒုက္ခကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်ကောင်းစားပျော်ရွှင်ဖို့ စတေးရတာ အစိုးရကောင်းတစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ပဲ။ ခုချိန်မှာ ကချင်ပြည်သူတွေအတွက် အစိုးရနှစ်ရပ်ကို အသက်နဲ့ ရင်းပြီးရွေးချယ်နေရတဲ့အချိန်တစ်ခု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာ သွေးနံတွေလည်းညှီနေပြီ။ခု ကချင်ပြည်နယ်မှာ အထက်ကအကြောင်းအရာလို ဌာနဆိုင်ရာဒမြ၊သူခိုးတွေက ကေအိုင်အေဖက်က မရှိသေးတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ဘယ်အစိုးရက ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ကောင်းတဲ့ အစိုး၇လဲဆိုတာ စဉ်းစားနေရပြီ။ အဆုံးအဖြတ်ပေးဖို့ ဒုက္ခစစ်ပြေးဘ၀ကြားက ရဲရဲဝံ၀ံအဆုံးအဖြတ်ပေးနေရပြီ။ကချင်ပြည်သူတွေ အတွက် ဘယ်သူက သူပုန်လဲ ဘယ်သူကအစိုး၇လဲ။ဘယ်သူတွေက ဒမြ၊သူခိုးလဲ။ဘယ်သူတွေက သူရဲကောင်းလဲ။
သင်သာကချင်ပြည်သူ၊ကချင်လူမျိုးဆိုရင် သင့် အစိုးရက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။
tsaw-ra FB မှ
တောင်သာမြို့ ကျောက်ကာရွာ NLD ရုံးဖွင့်ပွဲ ဆန္ဒပြခံရ
တောင်သာမြို့နယ် ကျောက်ကာ ကျေးရွာတွင် NLDပါတီမှ ရုံးဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း ၄င်းအခမ်းအနားကို 3.11.2012 နေ့ နံနက် 10နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကျောက်ကာကျေးရွာ မှ ဒေသခံပြည်သူများမှ NLD ပါတီသည် မိမိတို့ ဒေသအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိဘဲ အခုမှ ရုံးလာဖွင့်တာ ငါတို့နယ်မှာ NLD ပါတီကို မလိုလားဘူး၊ ငါတို့နယ်ကို ကောင်းအောင် ကြည့်ပေးတဲ့လူကိုဘဲငါတို့အ၀င်ခံ နိုင်မယ်၊ ငါတို့ရွာမှာ NLD ပါတီအ၀င် မခံနိုင်ဘူး၊ တို့ရွာမှာ3ယောက်လောက်ဘဲ NLDလုပ်တာနဲ့ တို့ရွာမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲ မခံနိုင်ဘူးဟု ပြောဆိုကာ နံနက် 8နာရီခန့်မှစပြီး ရွာအ၀င်မှ ကျေးရွာပြည်သူ 200 ဦးခန့်သည် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် “ တို့ရွာ တည်ငြိမ်း အေးချမ်းမှုကို ပျက်စီးအောင် မလုပ်ပါနဲ့၊ NLDအလိုမရှိဘူး၊ ” ဟူသော လက်ကိုင် ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ ကျေးရွာတွင် NLD ပါတီဆိုင်းဘုတ် တင်သော သူ၏ အရည်အချင်းမှာ- ဦးနန်းတင် (အဖ) ဦးလှမောင်၊ အသက်(၅၃) ၊ ပညာအရည်အချင်း (၇) တန်းသည် စစ်တပ်မှ စစ်သားအဆင့်ဖြင့် စာရိတ္တ ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာလည်း မယားငယ်နှင့် ပေါင်းသင်းနေသူဖြစ်ပြီး အဖေ အရင်း ခေါက်ခေါက် ကိုဓါးကြိမ်းကြိမ်းပြီး ငါကိုင်တုတ်ဆဲ ရေးတိုင်းထွာမှုများ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ရ.ယ.က ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်စဉ်က လည်း ထန်းသမား ကိုတိုးကြည်၏ ဇနီးအားဆံပင်ဆွဲ ပါးရိုက်သော ကိစ္စဖြင့်ထောင် ကျမလိုဖြစ်ကာ ရ.ယ.က ဥက္ကဋ္ဌ ဘ၀မှရပ် နားခဲ့ရပါတယ်။ ယခု ကျေးရွာတွင်လည်း သာရေး/နာရေး ကိစ္စများတွင် ၄င်းအားဘယ်သူမှ မသုံးဘဲ ကျေးရွာမှ ပစ်ပယ်ထား သူဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ယခုကိစ္စများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် NLD ပါတီသည် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများ တွင်ရုံးခန်းဖွင့် လှစ်ရာတွင် အများပြည်သူနှင့် မတည့်ူသူများ၏ နေအိမ်များ တွင်ရုံးဖွင့်လှစ်နေ ရကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ကုလားလို့ သုံးထားပါတယ်....
ဒါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးထဲက ကောက်နှုတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်..
အောင်ဆန်း၏ မိခင်မျိုးရိုးထဲတွင် ရာထူးကြီး မင်းမှုထမ်းအချို့ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဖာသည်လယ်သမားမျိုးရိုးမှ ဖြစ်ပြီး မိမိ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်
ဖြစ်သော ရှေ့နေအလုပ်၌ အောင်မြင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ထို့ကြောင့် ထက်မြက်သွက်လက်လှသော မိခင်ဒေါ်စုသာ
လျှင် မိသား စု စားဝတ်နေရေးကို အဓိကတာဝန်ယူရပါသည်။ဒေါ်စု၏ ဦးလေးတော်သူသည် ဗြိတိသျှတို့ကို ရှေးဦးစွာ တော်လှန်ဆန့်ကျင်ခဲ့သော မြန်မာအုပ်စုတစုကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့ပါ သည်။ နောက်ဆုံး၌ “ဗိုလ်လရောင်” ခေါ်“ဦးမင်းရောင်” အား ဗြိတိသျှတို့က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် လိုက်ပါသည်။ “ကုလား တို့ ကျွန်မခံ” ဟူသော စိတ်ထားရှိခဲ့သည့် ထိုရဲရဲတောက် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကား အောင်ဆန်းမိသားစုနှင့် နယ်သူနယ်သား များ ဂုဏ်ယူစံထား အားကျဖွယ်ရာ ဖြစ်လာပါသည်။(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားသော ဆောင်းပါး)_
သစ်ထူးလွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် အတွင်းသတင်း Facebook စာမျက်နှာတို့တွင် ဖော်ပြခဲ့သော "Favourite Journal ၏ မေးမြန်းချက်မှာ သမ္မတကြီး မျက်ရည်ကျ" ဟူသော သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်
၁။ (၂၁-၁၀-၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အထက်ဖော်ပြပါ သတင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်ကို
အောက်ပါ Link တွင် တွေ့ရှိရပါသည်-
၂။ ယင်းသတင်း၏ ဇစ်မြစ်မှ "အတွင်းသတင်း" အမည်ရှိ Facebook
စာမျက် နှာတစ်ခုမှ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းစာမျက်နှာမှာ အောက်ပါလိပ်စာ
အတိုင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်-
" ယမန်နေ့ နေ့လည်က နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတွင် သတင်းထောက်များ၏ မေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြားနေစဉ် ပွဲစပြီး မကြာမှီ မေးခွန်း ၃ခုခန့် ဖြေဆိုပြီးချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ဇောချွေးများ ပြန်လာကာ၊ မြေသိမ်း ယာသိမ်းကိစ္စမေးခွန်းများ၊ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် ၎င်း၏ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်ပိုင်အမြင်အပေါ် မေးခွန်းများ အစရှိသည်တို့ကို ရှောင်လွှဲဖြေဆိုသွားပြီး အလွန် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်လျက်ရှိပုံ ပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်မကြာမှီ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမှ ခန့်အပ်နိုင်မှု အနေအထားနှင့် ပတ်သက်ပြီး Favourite Journal မှ မေးမြန်းချက်အရောက်တွင် မျက်စိမျက်နှာပျက်ကာ အသံများတုန်လာ၍ ပုံပါအတိုင်း မျက်ရည်များပါ ကျဆင်းလာခဲ့သည်။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်နှင့်ပက်သက်၍ မီဒီယာများအနေနှင့် နားလည်မှရှိစွာ ရေးသားဖော်ထုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ကြရန်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်ဆန်း၏ အဖြစ်အပျက်ကဲ့သို့ လူထုအကြား ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိမသွားစေရန်အတွက် ပွဲအပြီးတွင် သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးဇော်ဌေးမှ လိုက်လံ ပြောဆိုတောင်းပန်ထားသောကြောင့် မီဒီယာများအားလုံးကလဲ ယခုချိန်ထိ ရေငုံ နှုတ်ပိတ်လျက်ရှိနေကြသေးကြောင်း အတွင်းသတင်းများ ရရှိထား (21, Oct, 2012 )"
၄။ လူထုအကြားပြန့်နှံ့ရောက်ရှိမသွားစေရန် မိမိမှ လိုက်လံပြောဆို တောင်းပန်ထာားသောကြောင့် မီဒီယာများမှ ရေငုံနှုတ်ပိတ်လျက် ရှိနေသေးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤသို့သော ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက လူပေါင်း(၁၀၀)ကျော်အား မည်သို့မျှ နှုတ်ပိတ်၍ မရနိုင်သည်မှာ အားလုံး အသိပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ၍ သတင်းသဖွယ်ထုတ်ပြန်လာသည်မှာ မိမိတို့အားလုံး မျှော်မှန်းထားခဲ့သော တာဝန်ယူမှုနှင့် ဒွန်တွဲသည့် လွတ်လပ်မှု ဟူသော အခြေအနေအတွက် များစွာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါသည်။
၅။ မီဒီယာပေါင်း(၅၀)ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် သတင်းမီဒီယာ လောကာသားပေါင်း(၁၂၈)ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည့် အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၏ အစအဆုံး မှတ်တမ်းရုပ်/သံများလည်း အွန်လိုင်း မီဒီယာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဤသတင်းမှာ လုံးဝ မဟုတ်မမှန် လိမ်ညာထားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ထိုနေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသူများ အားလုံး သိရှိထားပါသည်။
၆။ အဆိုပါသတင်းကို အစပြုလွှင့်တင်ခဲ့သည့် "အတွင်းသတင်း" Facebook စာမျက်နှာသည်လည်းကောင်း၊ သတင်းအဖြစ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် သစ်ထူးလွင် ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လည်းကောင်း၊ အဆိုပါသတင်းအရင်းအမြစ်များကို ကိုးကား၍ ဝေဖန်ပြောဆိုနေမှုများသည် လည်းကောင်း မည်သို့သော အကြောင်းရင်းနောက်ခံများ တည်ရှိနေသည် ဆိုသည်မှာလည်း ယင်းတို့ဘာသာပင် သိရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
၇။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးသည် သတင်းမီဒီယာများကို အထူးအလေးထား၍ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကို ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ တာဝန်ကို စတင်လွှဲပြောင်းချိန်မှ ယနေ့အချိန်အထိ ဖြစ်ကြောင်း အထူးတလည် ပြောရန် မလိုအပ် ဟု ယူဆပါသည်။
၈။ ဤသို့ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အဓိက တွန်းအားပေး ညွှန်ကြားခဲ့သော နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေဖြင့်လည်း လူသားတို့၏ သဘာဝကို နားလည်ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံသတင်း ဖန်တီးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတို့ကြောင့် မိမိတို့အနေဖြင့် ပြည်သူများအတွင်း ဟုတ်နိုးနိုး ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်မည် စိုး၍ ယခုကဲ့သို့ ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ပြန်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၉။ ယနေ့အချိန်အခါသည် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဖင်ပြဲအောင် ရုန်းကန်ကြိုးစားကြရမည့် အချိန်ဖြစ်သလို မတူညီမှုများ ဘေးဖယ်ထားပြီး နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူများအကျိုးကို Common Ground ထား၍ စံနမူနာပြ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်ေ ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် မိမိတို့ နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြများ ဖြစ်သည် ဟုလည်း အခိုင်အမာ ယုံကြည်ထားပါသည်။
၁၀။ သူ့ဘက်-ကိုယ့်ဘက် ဘက်အစွဲများ၊ ရန်-ငါ အကွဲများ မပြေပျောက်သေးသော သဘော သဘာဝကို နားလည်သိရှိထားသည့်တိုင် " နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံ ခြင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံခြင်းသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကို ဆန့်ကျင်ခြင်း မဟုတ်" ဟူသော အထက်တန်းကျသည့် အတွေးအခေါ်များ အစပြု လျှောက်လှမ်းရမည့် အချိန်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဟုလည်း ယုံကြည်ပါသည်။
၁၁။ သတင်း လွှင့်တင်သော "သစ်ထူးလွင်" ဝက်ဘ်ဆိုက် မည်သူ လွှင့်တင်နေသည်ကို မိမိတို့ သိရှိထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မမှန်သတင်း အစပြု ဖြန့်ချိသော "အတွင်းသတင်း Facebook စာမျက်နှာ" နှင့် မိမိတို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ရှိသည်များကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၁၂။ ယနေ့လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ Stakeholder များအားလုံးက နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူ အကျိုးအတွက် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပြီ ဖြစ်ရာ ဤသို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ လုပ်ဆောင်လာကြသူများသည်လည်း မိမိတို့၏ အစွန်းရောက်သော ခံယူချက်များ၊ ငါနှင့်မတူ ငါ့ရန်သူ ဟူသော ခေတ်ဆွေးအတွေးအခေါ်များ ဖယ်ခွါချရန် အချိန်တန်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် - https://www.facebook.com/hmuu.zaw.forum
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီသက်တမ်း ကတော့ ခရီးတစ်ဝက်ရောက်လုနီးပါပြီ။ ၂၀၁၅မှာ ရွေးကောက်ပွဲကြီးပြန်စတော့မယ့် သမ်္မတအသစ်၊ ပါတီအသစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကို ချီတက်မလား၊ ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းထဲကအကောင်းတွေကိုရွေး ထုတ်ပြီး-ရောသမမွှေကြမလားဆိုတာ-၂၀၁၅ကတော့ ရင်တမမနဲ့ စောင့်ကြိုနေလေရဲ့။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ သင်တို့ရဲ့ပါတီဝင်ကဒ်ပြားအရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်မ နေကြပါနဲ့၊ ပါတီဝင်တွေအပေါ်မှာလုံးဝဥဿုံယုံကြည်မူ့အပြည့်ရှိနေကြလား။ ပြည်သူတွေထဲမှာ လူတစ်ယောက်ကပါတီဝင်ကဒ်ပြားဘယ်နှစ်ခု ကိုင်ဆောင်ကြသလဲဆို တာအဖြေရှာကြပါ။ အမာခံတွေမွေးထုတ်ပေးဖို့ သင်တို့ပါတီတွေကဘာတွေစွမ်းဆောင် ပေးပြီးပြီလဲ။ ပြည်သူတွေကတော့မဲဆန်္ဒပြုပြီး-သင်တို့ကိုအပေါ်ရောက်အောင်တွန်းတင် ပေးလိုက်တယ်။ အပေါ်လည်းရောက်သွားတော့-အောက်ကတွန်းတင်ပေးလိုက်တဲ့ မဲဆန်္ဒရှင် ပြည်သူတွေကိုဘာမှပြန်မကြည့်ကြတော့ဘူး၊။ မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့- ကိုရွှေစည်းရုံးရေးမှူးတွေရဲ့မျက်နှာကိုလည်းရွှေးကောက်ပွဲပြီးကမမြင်ရတော့ဘူး၊ သူတို့ခင်းပေးတဲ့လမ်းတွေလည်းပတ်ကြားတွေအက်-ရေညှိတွေတက်နေပြီ။
ပါတီဝင်ကဒ်တွေကိုင်ဆောင်ပြီး-နဝေတိမ်တောင်ဖြစ်နေကြတဲ့ပါတီဝင်တွေရဲ့ ဘ၀တွေကို ဂရုပြုမိကြရဲ့လား။ ရပ်/ကျေးတွေမှာက တစ်ပါတီထဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်- သူ့ထက်ငါအပြိုင်ဆိုင်ကြဲနေကြတာ အားလုံးအသိပါ။ အပေါ်မှာတော့မသိဘူး-အောက်မှာကတော့ ဘယ်ပါတီကလက်မထောင်နေလည်းဆိုတာအသာလေးစောင့်ငဲ့ ကြည့်ကြအုံး။ ပါတီသာဝင်ထားကြတယ် အခအုချိန်ထိ ဘာမှဖြစ်မလာသလို ဘာမှလည်း ပြောင်းလဲခြင်းမရှိလာပါဘူး။ အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် ““ ဒုံရင်းကဒုံးရင်း ”” ပါဘဲ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်-NLD ပါတီကတော့ သူ့ပါတီဝင်တွေအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ လူငယ်များနဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေ မဖြစ်ဘို့အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်ကြားနိုင်ဘို့မြို့နယ်အလိုက် သင်တန်းကျောင်းတွေ ဖွင့်လှစ်ပေးဘို့ NLD ဥက္ကဌဒေါ်စုကြည် ကိုယ်တိုင်က မြို့နယ်တွေဆင်းပြီး သူပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့ ကတိဂ၀တ်တွေ ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ပါတီဝင်တွေအတွက် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်တစ်ခုဘဲလေ။
ပါတီတစ်ခုရေရှည်တည်တံ့ဖို့အတွက် အဲဒီပါတီမှာ အမာခံအင်းအားလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမာခံတွေဟာသူရဲ့ပါတီအပေါ်မှာ သစ်္စာရှိတဲ့အမာခံတွေဘဲဖြစ်ဖြစ်ရမယ်။ ဘယ်သူတွေစည်းရုံးစည်းရုံ၊ ဘယ်ပါတီကပဲ မဲဆွယ်ဆွယ်ကိုယ့်ပါတီမှကိုယ်ပါတီဘဲဆိုတဲ့ သံမဏိစိတ်ဓါတ်မျိုးရှိနေရပါမယ်။ တချိန်ကအရှိန်ဝါတွေသုံးပြီးပါတီဝင်အင်းအားနဲ့ကဒ် ပြားတွေအများကြီးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ပါတီကြီးတွေကတော့ အခုချိန်မှာမိမိပါတီဝင်တွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့ အမာခံပါလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိမိတို့ရဲ့ပါတီဝင်တွေ ပါတီအပေါ်မှာ ယုံကြည်သက်ဝင်မူ့ ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ဖို့လိုနေပါပြီ။
၁၉၉၀-ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းက(တ.စ.ည)ရဲ့ ပါတီဝင်အင်အားဟာ ကဒ်ပြားအရေအတွက်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကြည့်ရင်းကို မယှဉ်နိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ (တ.စ.ည)ရဲ့ အရန်ပါတီဖြစ်တဲ့ တောင်သူ လယ်မား စည်းလုံး ညီညွှတ်ရေး ပါတီ၊ အလုပ်သမား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ၊ လူငယ်စည်းလုံး ညီညွှတ်ရေး ပါတီ ဆိုတဲ့ အရန် ပါတီ(၃)ခု ကလည်း(တ.စ.ည)ကို ၀န်းရံပေးထားကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက (မ.ဆ.လ)ရဲ့ အရှိန်အ၀ါ ကလည်း အငွေအသက် ကျန်သေးတော့ (တ.စ.ည) အတွက် အင်အားစုရတာ သိပ်မခက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း (တ.စ.ည)ရဲ့ အကြီးအကဲပိုင်းက အနိုင်လို့ ယူဆခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်မှာတော့၊ (NLD)ကို အပြတ်သတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ဒါသင်ခန်းစာယူစရာပါ။ ကဒ်ပြားဟာ ကဒ်ပြားဘဲ၊ ကဒ်ပြားသည် အမာခံမဟုတ်ဆိုတာ သတိချပ်စေချင် ပါတယ်။ ဒီတော့ကား အချိန်ရှိခိုက် လုံးလစိုက်ပြီး မိမိပါတီဝင် တွေရဲ့ ဘ၀ တစိတ်တဒေသကို အောက်ခြေအထိ ဆင်းပြီး ကြည့်ရပါမယ်။ ကိုယ်ပါတီဝင်တွေ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ ဘာအခက်အခဲ တွေရှိနေလဲ၊ ဘာတွေ လုပ်ပေးဘို့ လိုအပ်သလဲဆိုတာ၊ ပါတီအကြီး အကဲတွေ ဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုနေပြီ။
ဟို တစ်လောတုန်းက ဂျာနယ် တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ မြို့နယ် အလိုက်ပြည် သူလူထု (ပါတီဝင်)တွေ အတွက် အတိုးနှုန်း သက်သာတဲ့ ချေးငွေတွေ ချပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း အဲဒီချေးငွေတွေဟာ ပြည်သူလူတု (ပါတီဝင်)တွေ အပေါ်မှာ ကျိုးသက် ရောက်မှု့ မရှိခဲ့ဘူး မြို့နယ် အကြီးအကဲပိုင်းကဘဲ မိမိတို့ ကိုကျိုးအတွက် အသုံးချသွား ကြသည်။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ နေ့ပြန်တိုး၊ မတ်တိုးတွေယူပြီး စားဝက်နေရေး အတွက် ဘ၀ကို ဆင်းဆင်းရဲရဲ ရုန်းကန်နေရတဲ့ လူတွေဆီမှာ ဘယ်ပါတီက ကဒ်ပြားကို ကိုင်ဆောင် ထားကြသလဲ ဆိုတာလေ့လာကြည့်ပါ။ ထမင်းမကျွေးတဲ့ အဲဒီကတ်ပြား တွေကို သူတို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကိုင်ဆောင်ထားနိုင်ကြမလဲ။ သူတို့တွေဆီက ထောက်ခံမဲ တစ်ပြားကို အားမနာ လျှာမ ကျိုးနဲ့ ရယူပြီး အမတ်လောင်း ဖြစ်သွားတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက သူတို့ရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးကို ဘယ်အချိန် ကာလအထိ စောင့်စားခိုင်းအုံးမှာလည်း။
ကိုယ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူတွေ စီးပွားရေးကြပ်တည်းမူ့၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး မူ့၊ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရမူ့တွေကို ၂၀၁၅ မတိုင်ခင် ကွင်းဆင်း လေ့လာကြပါအုံး၊ နောင်လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မိမိတို့ပါတီဝင်တွေက မိမိတို့ကို ထောက်ခံအားပေးနိုင်တဲ့ အင်အားတွေ ရှိကြသေးရဲ့ လားလို့၊ သူတို့ဘ၀၊ သူတို့ စားဝတ်နေရေး အတွက်၊ သူတို့အားကိုး အားထားပြုတဲ့ ပါတီကြီးက ဘာတွေနဲ့ ချွေးသိပ်ပြီးပြီလဲ၊ ““အူမတောင့်မှ သီလစောင့်တယ်”” ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားရပ် တစ်ခုလို (NLD) က အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာ အတွက် ခင်းပေးတဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်ကို မိမိပါတီဝင်တွေ တက်မလျှောက်ကြဘူးလို့ ဘယ်သူက အာမခံချက် ပေးနိုင်လို့လဲ။ ဆင်းရဲသား ပြည်သူလူထုရဲ့ ဘ၀မှာ စားဝတ်နေရေးသာ ပထမ၊ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဒုတိယလေ၊ ဒီတော့ တိုင်းပြည် အတွက်လို့ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေနေ တိုင်းပြည်ဆိုတာ ပြည်သူ တွေရှိလို့ ဖြစ်လာတာပါ။ ပြည်သူတွေ ချမ်းသာမှ တိုင်းပြည်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာ ကတော့ အမှန်တကယ် လက်တွေ့ကြတဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ရမယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ အမှန်တကယ် လက်တွေ့ကြတဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုဆိုတာ ဘယ်သူမှငြင်းလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ ပါတီ ခေါင်းဆောင် ပုဂ်္ဂိုလ်များ သိထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ (ပြည့်ဖြိုးအောင်)
HotNews ဂျာနယ် http://www.hotnewsweekly.com/archives/12258
ကျေးရွာ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲ NLD...
တောင်ကြီးအထက(၄) ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး လုပ်ရပ်များ အတ...